Reer Galbeedka oo horjoogsaday Xayiraad Ruushka doonayey inuu saaro Turkiga - iftineducation.com
Reer Galbeedka oo horjoogsaday Xayiraad Ruushka doonayey inuu saaro Turkiga
iftineducation.com – Dowlada Ruushka oo kulan deg deg ah oo uu xalay yeeshay Golaha Amaanka kusoo bandhigay qaraar ka dhan ah Turkiga ayaa waxaa si adag u qaadacay dowladaha reer Galbeedka.
Maraykanka iyo France oo codka awooda VETO kuleh golaha Amaana ee Qaramada Midoobay ayaa diiday qaraarka uu soo diyaariyey Ruushka oo sheegaya in Turkiga uu joojiyo duqeynta uu la beegsaneyo dalka Siiriya. Falkaasi oo uu Ruusha ku sheegay inuu yahay ku xadgudub madaxbanaanida iyo Qaranimada Siiriya.
Balse dalalka Maraykanka iyo France ayaa ugu baaqay Ruushka inuu joojiyo taageerada indho la’aanta ah oo uu siinayo xukuumada Siiriya ee Bashar Al Assad oo ay ku tilmaameen siyaasad aan guul lagu gaareen.
Turkiga ayaa todobaadkan dar dar geliyey weerarka uu ku qaadayo kooxaha Kurdida ah ee ku sugan Waqooyiga Siiriya, kuwaasi oo horey weeraro uga geystay gudaha dalka Turkiga.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa Jimcihii shalay khadka telefonka kula hadlay Madaxweynaha Turkiga Tayyib Erdogan oo uu kala hadlay xiisada ka taagan Siiriya iyo qaraxii arbacadii ka dhacay magaalada Ankara ee caasimada Turkiga, qaraxaasi oo ay shalay sheegteen koox ka tirsan Kurdida oo lagu magacaabo TAK.
Xukuumada Maraykana ayaa khamiistii dowlada Turkiga ugu baaqday hakinta duqeynta waqooyiga Siiriya iyo kooxaha Kurdida oo ay Maraykanka u arkaan kooxo loo adeegsan karo la dagaalanka Daacish, balse Turkiga ayaa sheegay inuusan cidna uga heybaysan doonin la dagaalanka dhamaan kooxaha ay u arkaan iyagu inay khatar ku yihiin amnigooda.
Bahdilka Wefdiga Raysalwasaaraha Soomaaliya ee Garoonka Joma Kenyatta, Nairobi
Trump iyo Hillary oo Guuleystay